ध्यान के हो किन र कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस् अद्भुत जानकारी। – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/ध्यान के हो किन र कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस् अद्भुत जानकारी।
ध्यान के हो किन र कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस् अद्भुत जानकारी।
वर्तमानमा बाँच्नु भनेको ध्यान हो। एकाग्रता ध्यान होइन। ध्यान को मूल अर्थ हो जागरूकता, अवेयरनेस, होश हो। ध्यानको अर्थ एकाग्रता हुँदैन। एकाग्रता फ्ल्यासलाइटको स्पट जस्तो हुन्छ जुन केवल एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ, तर ध्यान बल्ब जस्तो हो जुन चारै दिशामा प्रकाश फैलन्छ।
क्रिया ध्यान हैन । धेरै व्यक्तिले कार्यलाई ध्यान भनेर बुझने गल्ती गर्दछन्, जबकि कार्यहरू ध्यान जगाउने विधिहरू हुन्। विधि र ध्यान बीच भिन्नता छ। कार्य भनेको एक साधन होइन। क्रिया एक साधन हो साध्य होईन । कार्य एक झाडू जस्तै हो । आँखा बन्द गरेर बस्नु पनि ध्यान होइन। मूर्तिको सम्झना गर्नु पनि ध्यान होइन। माला जप गर्नु पनि ध्यान होइन। ध्यान कार्यबाट स्वतन्त्रता छ। विचारबाट स्वतन्त्रता छ। ध्यान दिमागबाट अनावश्यक कल्पनाशक्ति र विचारहरू हटाउनु र शुद्ध र निर्मम मौनतामा जानु हो। ध्यान भनेको विचारहरूको नियन्त्रण हो।
ध्यान गर्दा, इन्द्रियहरूको साथ मन, मन बुद्धिको साथ र बुद्धि र विवेक आफ्नो प्रकृतिमा समाहित हुन्छन्। जसले यो दृष्टी भावको अर्थ बुझ्दैनन्, तिनीहरूले शुरूमा ध्यान अभ्यास गर्न आँखा बन्द गर्नुपर्छ। जब अभ्यास बढ्दछ, आँखा बन्द वा खुला भए पनि साधक आफ्नो रूपसँग जोडिएर रहन्छ र अन्तमा काम गर्दा ध्यानको स्थितिमा रहन सक्छ।
ध्यान स्वस्थ हुन। ध्यानबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ। टाउको दुखाइ कम हुन्छ शरीरमा प्रतिरक्षाको विकास हुन्छ। ध्यानले शरीरमा स्थिरता बढाउँछ। यो स्थिरता शरीर लाई मजबूत गर्दछ।
आधुनिक मानिसको लागि ध्यान आवश्यक छ किनकि ध्यानले मन र दिमागलाई शान्त राख्छ। ध्यान गर्दा तनावबाट मुक्त्ति पाइन्छ। त्यहाँ कुनै चिन्ता, डर र मुटुमा विकारहरू हुदैन। ध्यानले तपाईंको इन्द्रियबाट भावना र विचारहरूको बादल हटाउछ र तपाईंलाई वर्तमानमा शुद्ध बनाउँछ। ध्यानको अभ्यासले जागरूकता बढाउँदछ। ध्यान गर्नेले मेकानिकल तरिकाले बाँच्न छोड्छ।
आफैलाई चिन्न पनि ध्यान आवश्यक छ। मन र विचारहरूमा लुकेको बादलबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि ध्यान एक मात्र उपाय हो। भनिन्छ कि मृत्यु पछि कोही बेहोसको अन्धकारमा जान्छ तर ध्यान गर्नेहरूको मृत्यु हुँदैन। ध्यान आफैलाई खोज्ने एक मात्र विकल्प हो।
ध्यानले वर्तमानलाई हेर्न र बुझ्न मद्दत गर्दछ। शुद्ध देख्ने क्षमता बढाउँदा चेतना जाग्नेछ, चेतनाको कारण विवेक बढ्नेछ। विवेकको बृद्धि संग, भावना हुनेछ। यो ध्यानको महत्त्व हो। ध्यान बाहेक अन्य सबै उपचारहरू केवल थोरै मात्र हुन्। ज्ञानीजनहरु भन्छन् कि जीवनमा सबै चीज प्राप्त गर्ने सूचीमा सबै भन्दा माथि आफूलाई राख्नुहोस्। आफूलाई नबिर्सनुहोस्। सत्तरी बर्ष पनि सत्तरी सेकेन्ड जस्तै हुनेछ।
मानवको रूपमा आज संवेदनाको स्तर घट्दै गइरहेको छ, यसले पशु जीवन बिताउन बाध्य छ। आजका मानिसमा सबै प्रकारका क्रूर प्रवृत्तिहरू बढेका छन्। परिवारहरू टुक्रिरहेका छन्, हिंसा, बलात्कार र ईर्ष्या स्तर बढेको छ। मानिस अहिले शरीरको तल्लो भागमा बस्दैछ। यी सबैको कारण यो हो कि मानिस आफैंबाट टाढा गयो। ध्यानले तपाईंलाई आफैसँग जोड्दछ। आत्मासँग जोड्दछ र यसलाई संवेदनशील र मायालु बनाउँछ। आज संसारलाई बढी प्रेम, हास्य र संवेदनाको आवश्यकता छ। ध्यान आगो जस्तै छ।यसमा मन भित्रको दुष्टहरू जलाइन्छन्
कसरी ध्यान गर्ने
कसरी ध्यान गर्ने? कसरी सास फेर्ने, जीवन कसरी जीउने ?
मनन गर्ने आरम्भिक तत्वहरू- १। विश्वासको गति, २। मनोवैज्ञानिक हलचल ३। ध्यानको लक्ष्य र ४। चेतनापूर्वक जीवन जिउन। यदि तपाईं माथिका चारमा ध्यान दिनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं ध्यान गर्न सिक्नुहुनेछ।
मात्र सास फेर्ने कुरामा फोकस गर्नुहोस्। यस समयमा, तपाईंले आफ्नो मानसिक हलचल पनि ध्यान दिनुपर्दछ। यदि एक विचार आयो र त्यसपछि अर्को विचार आयो र गयो भने तपाईले बुझ्नुहोस् म किन व्यर्थमा सोच्दै छु।
तपाईंले ध्यान गर्दा ध्यानपूर्वक ध्यान र लक्ष्य बनाउनु पर्छ। मेकानिकल भएर बस्नुहुन्न।ध्यानमा बस्नु नै सबैभन्दा गाह्रो काम हो। व्यक्तिहरु केहि क्षणको लागि सचेत रहन्छ र त्यसपछि मेकानिकल रूपमा फेरि बस्न थाल्छ। ध्यान भनेको मेकानिकल जीवन जिउन छोड्नु हो।
कोरोनाले २९ वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु, जुम्ल्याहा वच्चा जन्माउँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि छटपटाएरै गयो ज्यान